राजनीति Archives - Page 75 of 118 - A complete Nepali news portal based on news & views political, economy, sports, analytical reports, entertainment, social, national-international news
काठमाडाैं, २४ मंसिर । प्रहरीकाे सर्वाधिक खाेजीमा रहेका राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका एक उम्मेदवार फेरि चर्चामा अाएका छन् । २०७२ साल भदौ ७ गते कैलालीकाे टिकापुरमा घटेकाे घटनाका बेला सर्वाधिक चर्चामा अाएका र त्यसबेलादेखि नै भूमिगत जीवन बिताउँदै अाएका रेशम चाैधरी फेरि चर्चामा अाएका छन् । कैलालीकाे निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा […]
२४ मंसिर २०७४, आईतवार १६:३३ December 12, 2017 Nonstop Khabar
झापा, २४ मंसिर । नेकपा ९एमाले० का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झापा क्षेत्र नं। ५ बाट विजयी भएका छन् । उनले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी मत ल्याएर रेकर्ड पनि कायम गरेका छन् । झापा ५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवार बनेका ओलीले नेपाली कांग्रेसका डा. खगेन्द्र अधिकारीलार्इ पराजित गरेका हुन् । अाेलीले अधिकारीलार्इ २८ हजार ८ सय […]
२४ मंसिर २०७४, आईतवार १५:३० December 12, 2017 Nonstop Khabar
तनहुँ, २४ मंसिर । नेपाली कांग्रेसमा देउवाका कट्टर प्रतिस्पर्धी मानिएका रामचन्द्र पाैडेल पराजित भएका छन् । २६ वर्षदेखि लगातार तनहुँबाट चुनाव जित्दै अाएका पाैडेल यसपटक वामगठबन्धनका अगाडि टिक्न सकेनन् । पाैडेललार्इ वाम गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका एमालेका किसानकुमार श्रेष्ठले पराजित गरेका हुन् । त्याे पनि ठूलै मत अन्तरले पाैडेललार्इ पराजित गरेका छन् किसानले । तनहुँ […]
२४ मंसिर २०७४, आईतवार १३:४८ December 10, 2017 Nonstop Khabar
चितवन, २४ मंसिर । चितवन क्षेत्र नम्बर ३ बाट चुनाव लडेका वामगठबन्धका प्रमुख नेता पुष्पकमल दाहालले हार्ने दावी केहीले गरिरहँदा नेपाली सेनाकाे एउटा गाेप्य रिपाेर्ट बाहिर अाएकाे छ । नेपाली सेनाले तयार पारेकाे एउटा रिपाेर्टमा प्रचण्डले ७ हजार मत अन्तरमा चुनाव जित्ने उल्लेख छ । प्रचण्डकाे चुनावी नतिजालार्इ अहिले निकै चासाेका साथ हेरिएकाे छ । […]
काठमाडौं, २४ मंसिर । प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको जारी मत गणनाको परिणाम अाइरहेको छ । परिणामले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अागामी सरकारको चावी बुझाउने देखिएको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म एमालेले ४७ स्थानमा जित हात पारिसकेको छ भने ३१ स्थानमा अग्रता लिएको छ । त्यसैगरी माओवादी केन्द्रले १६ स्‍थानमा जितेको छ भने १३ […]
काठमाडौं, २३ मंसिर । पूर्व डिअाईजी नवराज सिलवाल विजयी भएका छन् । चुनाव केही समय पहिले नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका सिलवालले ललितपुर क्षेत्र नम्बर १ बाट विजयी भएका हुन् । सिलवालले ३६ हजार ९४६ मत प्राप्त गरी विजयी हात पारेका छन् । सिलवालले नेपाली काँग्रेसका युवा नेता उदयशमसेर राणालाई फराकिलो मतान्तरले पराजित गरेका छन् । […]
२४ मंसिर २०७४, आईतवार ००:३६ December 10, 2017 Nonstop Khabar
झापा, २३ मंसिर । जारी मत गणनाको पछिल्लो परिणामअनुसार सबै क्षेत्रमा एमाले उम्मेदवारहरुले अग्रता लिएका छन् । नेपाली काँग्रेसले झापा दुईको (ख) का उम्मेदवार खड्‍कप्रसाद प्रसाईले प्रतिस्पर्धा गर्ने अनुमान गरेपनि उनीपनि एमाले बृख प्रधानसँग धेरै मतले पछि परेका छन् । त्यसैगरी क्षेत्र नम्बर २ बाट नेकपा एमालेका प्रतिनिध सभा सदस्य उम्मेदवार पवित्रा निरौला खरेल २४६६८ […]
२३ मंसिर २०७४, शनिबार १८:०० December 9, 2017 Nonstop Khabar
काठमाडाैं, २३ मंसिर । गाेरखा २ का उम्मेदवार तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले मतगणना नहुँदै हार स्वीकार गरेका छन् । श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा बाबुराम भट्टरार्इलार्इ बधार्इ दिएका छन् । गाेरखा २ काे मतगणना सकिएकाे छैन । मतगणना चलिरहे पनि उनले अाफ्नाे हार निश्चित भएकाे बुझेर ट्वीटरमा तीन वटा स्टाटस लेखेका छन् । उनले […]
२३ मंसिर २०७४, शनिबार १७:४० December 9, 2017 Nonstop Khabar
काठमाडौं, २३ मंसिर । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लवले चुनाव खारेज अभियानको क्रममा अाफ्नो पार्टीका अपील नेतृत्वमा भएका प्रतिरोधका कार्यक्रमलाई अज्ञात समूहले गरेको भनेर गरिएका प्रचारबाजी र टिप्पणीहरु भ्रामक, षड्‍यन्त्रकारी र ध्वंसात्मक भएको बताएका छन् । चुनावबारे पार्टीको अाधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न शनिबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा विप्लवले भनेका छन्, ”कतिपय सञ्चार माध्यमले बम पड्काएर […]
२३ मंसिर २०७४, शनिबार १३:०६ December 9, 2017 Nonstop Khabar
गाेरखा, २३ मंसिर । देशभर वामगठबन्धनले ध्यान तानिरहँदा गाेरखामा भने नयाँ शक्तिले ध्यान तानेकाे छ । धेरैकाे अनुमान विपरित नयाँ शक्तिका संयाेजक समेत रहेका बाबुराम भट्टरार्इ गाेरखा क्षेत्र नं. २ मा एक्लै अगाडि बढिरहेका छन् । नयाँ शक्तिकाे देशभर कतै अग्रता छैन र मत पनि धेरै अाएकाे छैन । तर गाेरखा २ मा बाबुरामले वामगठबन्धनका […]